TTSweet: ပြား ၈၀ အန်တီဆွိ ...
Posted by T T Sweet at 8:36 PM
မမိုး November 14, 2012 at 9:26 PM
ဗမာ တွေနဲ့ တွေ့ရလို့လေ...
ဒီမှာများ တဲထိုးပြီးစောင့်နေရတယ်ကွယ်းး((
မြန်မာမှန်း တန်းသိ ခံရတာ ကံကောင်းတယ် မှတ်ပါ..
ဒီမှာ ခဏခဏ အမေးခံရတယ်..ကမ္ဘောဒီးယား က လားတဲ့..
အင်း အမရေ ဒီမှာတော. 'ဖ' ထင်နေကြတယ်
susu November 15, 2012 at 2:05 AM
ဟိုကောင်မလေးက စတွေ.တွေ.ချင်းမှာ “အန်တီ” ခေါ်တာကို၊ တီဆွိက သူ.ကိုယ်သူ “အစ်မ”တဲ. ..ဟင်း....
khin November 15, 2012 at 9:38 AM
20% or 80%...it doesn't matter...but I'm sure you are 100% SWEET...
အော်ဇီ လိုနေရာမျိုးမှာ တစ်ရုံးထဲမှာ မြန်မာတွေ အများကြီးနဲ့ သွားတွှေ့ရတာ ပျော်စရာကြီး တီဆွိရာ :)
Natthamee November 16, 2012 at 5:47 PM
comment လုပ်လို့ ရပြီ
T T Sweet November 18, 2012 at 8:38 PM
4:37 AM (16 hours ago)
Anonymous has leftanew comment on your post "ပြား ၈၀ အန်တီဆွိ ...":
u look good..
T T Sweet November 19, 2012 at 9:01 PM
10:04 PM (22 hours ago)
mstint has leftanew comment on your post "ပြား ၈၀ အန်တီဆွိ ...":
တီတင့်မောင်လေးလည်းသြစီမှာရှိတယ် ဆွိတီ သူ့ရုပ်ကတော့ မြန်မာရုပ်လုံးဝမထွက်ဘူး ကျွေးမေမေနဲ့တူတော့ ပေါ်တူဂီရုပ်ဖြစ်နေတယ်း)
စကားမစပ် ဆွိတီခေါင်းပေါ်ကပန်းကြီးလှလိုက်တာ လူနဲ့ပန်းအလှချင်းပြိုင်နေတယ် (မုန့်ကျွေး :P)
အားလုံးကိုချေမှူန်းမယ် April 30, 2013 at 1:51 PM
TT Sweet လှတယ် ကပြားမို့ ထင်တယ် ပိုချောတယ်
TT ချောဆွီ လို့ ခေါ်မယ်။
အခု YGN ပြန်ရောက်နေပြီလား?
တခုခုကျွေးရင်း ဧည့်ခံချင်လို့ ပါ။
အားလုံးကိုချေမှူန်းမယ် April 30, 2013 at 1:52 PM
အားလုံးကိုချေမှူန်းမယ် April 30, 2013 at 1:59 PM